ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ ၀ယ်ယူမှုများနေလယ်လုပ်ခွင့်နှင့် ဖမ်းထားသူများ ပြန်လွှတ်ရေး လက်ပံတောင်း ဒေသခံများ တောင်းဆိုဧရာဝတီတိုင်း ဆားတောင်သူများ ဆက်တိုက် အရှုံးပေါ်နေNLD ပါတီဝင်ဟောင်း ၄ ဦး လျှောက်လွှာတင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆိုသယံဇာတ တူးဖော်ရေး လိုင်စင် တင်းကျပ်မည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> သူရဇော်ဟိန်း November 26, 2012 - 5:12 pm	နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံး မြန်မာပြည်ဖက်က စောင့်နေခဲ့တာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပါ။ နည်းဥပဒေတွေ မထွက်သေးတာတောင်မှ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲဖြစ်ဖို့ရှိနေပါပြီ။
Reply	swe htwe November 27, 2012 - 12:29 am	Negotiation is the best way now. We should think another factors if this project is forced to stopped. I think U Ag Min said the right thing although he should not say like that. But unity is strength and we all must realise that. Never surrender to another country how powerful he is.
Reply	မောင်မောင် November 27, 2012 - 1:44 am	ဒေသခံ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခပေါင်းမြောက်မြားစွာကို လစ်လျူရှုပြီး ဦးပိုင်တစ်ခုတည်း ကောင်းကျိုးအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကတိက၀တ်တွေကို တည်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ တရားမျှတမှု မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာကို ချပြလိုက်လည်း တကမ္ဘာလုံးက အစိုးရနဲ့ ဦးပိုင်ကို ၀ိုင်းဝန်းရှုံ့ချကြမှာပဲ။